Halloween na Italy | Njem zuru oke
Halloween na Italy
Isabel | 16/04/2021 11:05 | Emelitere ka 16/04/2021 12:05 | Italia
Abụọ n'ime ụbọchị kachasị mkpa egosipụtara na kalenda ndị Italy bụ ụbọchị ndị nsọ niile (nke a makwaara dị ka Tutti i Santi) nke a na-eme na November 1 na Day of the Dead (Il Giorno dei Morti), nke na-eme na Nọvemba 2. Ọ bụ maka ememme abụọ nke okpukpe na nke ezinaụlọ ebe ndị otu ya na-ezukọ icheta ndị na-anọghịzi. na ịsọpụrụ ndị Chineke doro nsọ.
A na-eme ememme abụọ a na mba nwere omenala Ndị Kraịst mana n’ụzọ dị iche iche. Na mba Anglo-Saxon na-eme emume Halloween ma na mba ndị nketa Katọlik a na-eme ya na ụbọchị ndị nsọ niile na ụbọchị mkpụrụ obi niile. N’isiokwu na-esonụ, anyị ga-abanye n’ajụjụ a na otu esi eme ememme Halloween na Itali.
1 Kedu ka esi eme Daybọchị Ndị Nsọ Niile na Italy?
2 Kedu ka esi eme ụbọchị mkpụrụ obi niile na Italy?
3 Na ụfọdụ mpaghara Italiantali?
4 Gịnị bụ Halloween?
4.1 Kedu ka esi eme ememme Halloween taa?
4.2 You maara aghụghọ ma ọ bụ ọgwụgwọ nke Halloween?
5 Olee otu esi eme ememme Halloween na Itali?
Kedu ka esi eme Daybọchị Ndị Nsọ Niile na Italy?
Ofbọchị Tutti i Santi bụ ezumike dị iche na ụbọchị Il Giorno dei Morti. A na-echeta November 1 n’ụzọ pụrụ iche nye ndị ahụ niile a gọziri agọzi ma ọ bụ ndị nsọ bụ ndị biri okwukwe ha n’ụzọ pụrụ iche ma ọ bụ nwụọ maka ya na ndị gafere purgatory, edoro nsọ ma birila n’alaeze nke eluigwe n’ihu Chineke. .
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n’ Italytali na mba ndị ọzọ nwere omenaala ndị Katọlik na-eme emume taa site n’igosi ndị senti na nnukwu ụka na katidral.
Kedu ka esi eme ụbọchị mkpụrụ obi niile na Italy?
Ọ bụ ezumike mba. N'ụtụtụ ụbọchị ahụ, a na-eme ememe maka arịrịọ onye ahụ nwụrụ anwụ na ụka ma maka ụbọchị ndị ọzọ, ndị Italitali na-aga ebe a na-eli ozu iji weta okooko osisi. nke ha ji asọpụrụ ndị ikwu ha nwụrụ anwụ, ọkachasị chrysanthemums, ma na-eche ili nke ndị ha hụrụ n'anya. Bọchị a na-eme na Nọvemba 2 na ebumnuche ya bụ ikpe ekpere maka ndị nwụrụ anwụ ka ha cheta ncheta ha wee rịọ Chukwu ka ọ nabata ha n'akụkụ ya.
N'aka nke ọzọ, Ndi oftentali na-esiri achicha esiri agwa dika “ossa dei morti” ọ bụ ezie na a na-akpọkarị ya "achicha nke ndị nwụrụ anwụ." Ọ na-anọkarị na nnọkọ ezinụlọ n'oge ụbọchị ndị a n'ihi na a kwenyere na onye ahụ nwụrụ anwụ na-alọta ụbọchị ahụ iji sonye na oriri ahụ.
Ezinụlọ ndị ọdịnala na-edozi tebụl ma gaa ụka iji kpee ekpere maka ndị na-efu. Emegheere ọnụ ụzọ ka mkpụrụ obi nwee ike ịbanye n'ụlọ ahụ ma ọ dịghị onye metụrụ nri aka ruo mgbe ezinụlọ ahụ si ụka laghachi.
Na ụfọdụ mpaghara Italiantali?
Sicilia: N'abalị nke ndị nsọ niile na mpaghara a, a kwenyere na onye nwụrụ anwụ nke ezinụlọ chọrọ ịhapụ onyinye maka ụmụntakịrị na mkpụrụ nke Martorana na ihe ụtọ ndị ọzọ.
Massa Carrara: N'ógbè a, a na-ekesa nri nye ndị nọ ná mkpa ma nye ha otu iko mmanya. Oftenmụaka na-emekarị olu olu nke sie chestnuts na apụl.
Ugwu Argentario: N’ebe a ọdịnala bụ itinye akpụkpọ ụkwụ n’ili onye nwụrụ anwụ n’ihi na echere ya na n’abalị nke ọnwa Nọvemba 2 mkpụrụ obi ha ga-alaghachi n’ụwa ndị dị ndụ.
N’ógbè ndịda Italytali a na-akwụ onye nwụrụ anwụ ụtụ dị ka ọdịnala ọwụwa anyanwụ nke Greek-Byzantine rite na emume a na-eme n'izuụka tupu mbido Lenti.
Gịnị bụ Halloween?
Dị ka m kwuru n'ahịrị ndị gara aga, A na-eme emume Halloween na mba ọdịnala Anglo-Saxon. Ememe a nwere mgbọrọgwụ na ememme Celtic oge ochie a na-akpọ Samhain, nke a na-eme na ngwụsị oge ọkọchị mgbe oge owuwe ihe ubi kwụsịrị na afọ ọhụrụ malitere itinye na mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ.
Oge ahụ Ekwenyere na mmụọ nke ndị nwụrụ anwụ na-agagharị n'etiti ndị dị ndụ na abalị Halloween, Ọktọba 31st. N'ihi nke a, ọ bụ omenala ime ụfọdụ emume iji soro onye ahụ nwụrụ anwụ kwukọrịta ma gbanye kandụl ka ha nwee ike ịchọta ụwa ọzọ.
Taa, ememme Halloween dị iche na nke mbụ. N'ezie, ị hụla ya ọtụtụ oge na fim! Edebewo ikike pụrụ iche nke Halloween enye ohere n'ememe nke igwuri egwu, ebe obu n’uche bu ikpori nd i enyi.
Kedu ka esi eme ememme Halloween taa?
Ọtụtụ mmadụ na-eji ejiji maka oriri n'ụlọ ma ọ bụ soro ndị enyi gaa n'ụlọ oriri na nkwari abalị iji kporie ndụ na mmemme isiokwu. N'echiche a, Ogwe, kọfị, diski na ụdị ụlọ ahịa ndị ọzọ na-agbasi mbọ ike idobe ụlọ ọrụ niile nwere isiokwu nke nnọkọ a.
Ihe ịchọ mma nke ọdịnala a bụ Jack-O'-Lantern, ugu nke a pịrị na ihu ya na ihu ihu ọchị na nke ime ya tọgbọrọ iji debe kandụl n'ime ya ma mee ka ọ pụta ìhè. Nsonaazụ dị egwu! Agbanyeghị, a na-ejikwa ihe ịchọ mma ndị ọzọ dị ka cobwebs, ọkpụkpụ, ụsụ, amoosu, wdg.
You maara aghụghọ ma ọ bụ ọgwụgwọ nke Halloween?
Mụaka na-enwekwa obi ụtọ na Halloween. Dị ka ndị okenye, Ha na-ejike eji agagharị n’ụlọ ndị agbata obi ha dịka otu na-arịọ ndị agbata obi ha ka ha nye ha ihe ụtọ ụfọdụ site na "aghụghọ ma ọ bụ ọgwụgwọ" a ma ama. Ma gịnị ka ọ gụnyere?
Dị mfe! Mgbe ị kụrụ aka n'ọnụ ụzọ onye agbata obi gị na Halloween, ụmụaka na-atụ aro ịnabata aghụghọ ma ọ bụ ịmekọrịta. Ọ bụrụ na ọ họrọ ọgwụgwọ, ụmụaka ahụ na-enweta swiiti mana ọ bụrụ na onye agbata obi ha họọrọ ọgwụgwọ, mgbe ahụ ụmụaka ahụ na-akwa obere ọchị ma ọ bụ kwuo okwu na-enyeghị ha swiiti.
Olee otu esi eme ememme Halloween na Itali?
N'agbanyeghị na ọ bụ ememme sitere na Anglo-Saxon, ọ gbasala ọtụtụ na andtali ma na-eme ya ọkachasị nke ndị okenye, ọ bụghị nke ụmụaka, n'ihi ya, ọ bụ ihe pụrụ iche ịhụ ka ha na-eme "aghụghọ ma ọ bụ ọgwụgwọ" gburugburu ụlọ.
Ọtụtụ ndị dresstali na-eji ejiji ka ha gaa oriri na nkwari na klọb ma ọ bụ n'ụlọ iji kporie ndụ n'etiti ndị enyi, na-a drinksụ mmanya ole na ole ma na-agba egwu ruo mgbe chi bọrọ.
N’ Italytali, a na-ejikwa ụdị ihe ịchọ mma Halloween ndị a na-achọ achọ mma dị ka ugu, anụ mmiri, cobwebs, ụsụ, ndị amoosu ma ọ bụ ndị mmụọ, na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Halloween na Italy
Imaara ka ndi Australia si ekele onwe ha
Okpukpe na England